Martech asongadin'ny bizMarketing Magazine | Martech Zone
Talata, Oktobra 9, 2012 Talata, Oktobra 9, 2012 Douglas Karr
Raha mahazo vintana ianao dia misorata anarana famandrihana Gazety bizMarketing. Namoaka indray ny lahatsoratray momba ny fitomboana sy ny ho avin'i SocialTV. Tena nahafinaritra anay ny nahita anay tamin'ny famoahana, ary ny gazety nomerika dia feno lahatsoratra sy torohevitra iray taonina.
Ny magazine bizMarketing dia manome orinasa an-tserasera sy matihanina amin'ny varotra karazan-dahatsoratra maro karazana natao mba hitazomana anao ny farany amin'ny tontolon'ny marketing amin'ny Internet tsy miova. Ny laharana isam-bolana dia misy fisafidianana atiny tsara indrindra misy eto amin'ny Internet, ary koa lahatsoratra tsy manam-paharoa nosoratana ho an'ny mpamaky anay ihany.
Tags: bizmarketingfamoahana ipadgazetymagazine marketing
Ny Ecosystem of Lifecycle Marketing